Umbhede othokomele, eduze kwedolobha
Bellingham, Washington, i-United States
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Jodi
QAPHELA: Ngicela ungazise uma ugonywe ngokugcwele ngaphambi kokucela ukubhukha. Ngiyabonga.
Igumbi lokulala eliyimfihlo elijabulisayo ekhaya engihlala kulo elinombhede we-Queen Tempurpedic kanye nendlu yokugezela yangasese. Nethezeka kuvulandi onelanga egcekeni elihle noma uzisonge ngencwadi egumbini lokuhlala elithokomele. Indawo enhle kakhulu: Hamba uye edolobheni, phambi kwamanzi, izindawo zokudlela, namapaki usuka kuleli khaya lomlingiswa.
Siyakwamukela e-Bellingham, "idolobha lenjabulo ephansi."
Ngokujabulisayo, indawo yangakithi ithobeke kakhulu. Ngithemba ukuthi uzoyithokozela le ndawo ethule, ephephile, nendlu yami enhle, eyakhiwe ngo-1900. Igumbi lokulala elijabulisayo elinegumbi lokuhlala elithokomele nekhishi elikhulu elivulekile. Igceke elakhiwe kahle, eliyimfihlo linendawo yokudlela enhle.
Kepha uma ufuna ukuphuma uhambe, le ndawo ENKULU. Ebhasini eliya eWWU. Imayela elingu-1 kuphela ukuya edolobheni ukuyothenga izinto zasendaweni, imakethe yabalimi besizini ngeMigqibelo, kanye nenala yezindawo zokudlela ezinhle. Ngaphansi kwekhilomitha ukuya ngase-Bellingham waterfront ukuze uthole ukushona kwelanga okuhle nokuhamba okuhle. Amapaki amaningana nezindawo ezimbalwa zokudla phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo.
Noma gxuma emotweni yakho ukhuphuke i-Mt Baker Hwy ukushushuluza okuthile (baqhosha ngeqhwa eliningi kunanoma iyiphi intaba e-N America) noma ukuhamba ngezinyawo okumangalisayo eduze nentaba-mlilo eqhumayo. Uma udinga ukulungiswa kwedolobha elikhulu, iVancouver, BC iyihora nje kuphela, futhi!
4.96(351 okushiwo abanye)
Lena indawo ehlala ikhaya elilodwa ephephe kakhulu futhi ekwazi ukuhambahamba.
Ngiyajabula ukunikeza iziphakamiso ngezinto okufanele uzenze, noma ngikushiye wedwa ukuze ujabulele ukuhlala kwakho -- ungazise. Ngisebenza ngaphandle kwekhaya izinsuku eziningi kodwa ngezinye izikhathi ngisuka ekhaya ehhovisi eliphezulu. Ngiba nezinhlelo njalo kusihlwa nangezimpelasonto. Ngokuvamile angibikho nhlobo ekhaya entwasahlobo nasehlobo kodwa ngizokwazisa ngaphambi kokuthi uhlale.
Ngiyajabula ukunikeza iziphakamiso ngezinto okufanele uzenze, noma ngikushiye wedwa ukuze ujabulele ukuhlala kwakho -- ungazise. Ngisebenza ngaphandle kwekhaya izinsuku eziningi ko…
Hlola ezinye izinketho ezise- Bellingham namaphethelo